Degmooyinka Gobolka M/Jeex oo si balaadhan looga xusay 18 May iyo doorka Badhasaabka Gobolka |
Degmooyinka Gobolka M/Jeex oo si balaadhan looga xusay 18 May iyo doorka Badhasaabka Gobolka
Masuuliyiinta Degmooyinka oo ammaan iyo mahad-naq u jeediyey Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex oo ku dhiiri-geliyey diyaar-gowga Dabaal-degyada xuska Maalinta Qaranka ee 18 May….
Geel ka qayb-qaatay dabaal-degga 18 May
Hargeysa(GNN)Todobada Degmo ee hoos-yimaada Gobolka Maroodi-jeex iyo Caasimada Hargeysa, ayaa si weyn looga dabaal-degay maalinta dib ula soo noqoshada qaranimada Somaliland ee 18 May, iyadoo degmo waliba magaalo-madaxdeeda iyo deegaamada hoos-yimaada ku qabatay Xaflado si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay dadweynuhu ku muujiyeen shucuurtooda waddaniyadeed iyo waxyaabaha ay qaniga ku tahay ee dhanka wax-soo-saarka iyo dabeecadaha dhaqan-dhaqaale.
Degmooyinka Daarasalaam, Laas-geel, Dacarta, Faroweyne, Sabo-wanaag, Sallaxley Cadaadley iyo Caasimaada oo ka kooban lix waaxood, ayaa waxa ka dhacay munaasibado ka dardar fiican xafladihii hore looga qaban jiray 18 May, taasoo sababteeda uu qayb-libaax ka qaatay Xafiiska Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex oo si gaar ah degmooyinka ka baxsan Caasimada Hargeysa ugala qayb-qaatay tabaabushaha dabaal-degyada.
Guddoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi, ayaa goor sii horaysay sheegay inay dhamaan degmooyinka u kala direen agabkii iyo Inkaaniyaadkii loogu talogalay inay Xafladaha ku diyaariyaan, sida Calamada iyo agabka kale ee xuska loo qorsheeyey, halka degmooyinka qaar ay iyaguna dhankooda door ka qaateen qurxinta Xafladaha lagu qabtay.
Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi
Madaxda Degmooyinka kala duwan ayaa uga mahad-naqay Badhasaabka uga gacan siiyey u diyaar-garowga iyo dabaal-degyada Xuska Maalinta Qaranka, waxaanay intaasi inay arrintani kamid tahay guulaha ka dhashay isbedel balaadhan oo ku yimi wada-shaqaynta Xafiiska Maamulka Gobolka iyo degmooyinka tan iyo intii Badhasaabka hadda joogaa xilka uu qabtay.
Waxa ay sheegeen masuuliyiinta qaarkood in isbedelkaasi suurto-geliyey isku-xidhnaan iyo nidaam bud-dhig u ah horumarinta oo dhex maray Xafiiska Badhasaabka iyo Degmooyinka.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qaybo kamida Warbixino Muuqaal ah oo ku saabsaan sidii Degmooyinka looga dabaal-degay.
Degmooyinka Caasimada Hargeysa
Degmooyinka kale ee Gobolka ayaa iyagana si weyn looga dabaal-degay